‘यसरी अन्तरवार्ता कसैले लिएको थिएन’ भन्दै नायीका साम्राज्ञी अन्तरवार्तामै धरधरी रोइन् (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/‘यसरी अन्तरवार्ता कसैले लिएको थिएन’ भन्दै नायीका साम्राज्ञी अन्तरवार्तामै धरधरी रोइन् (भिडियो हेर्नुस्)
2,566 1 minute read
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोष्ट गरपछि अहिले चर्चामा रहेकी नायीका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले मिडियामा अन्तरवार्ता नदिने बताएकी छन् । केही मिडिया र युट्युवरले आफुहरुका कुरालाई नराम्रो बनाएर पस्कने गरेका कारण तनाव झेल्नु परेको भन्दै उनले युट्युव र मिडियामा अन्तरवार्ता नदिने बताएकी छन् । उनले आफुहरुलाई नै नराम्रो बनाएर पैसा कमाउनेहरुलाई अब मौका नदिने बताएकी छन् ।
तर एउटा अन्तरवार्तामा आएकी साम्राज्ञीले यस्तो अन्तरावार्ता पहिलो पटक अनुभव गरेको बताएकी छन् । निकै राम्रो अन्तरवार्ता दिन पाएकी साम्राज्ञी धुरुधुरु रोएकी छन् । उनी आफु निकै भावनात्मक भएका कारण सानो कुराले पनि आँशु आउने बताएकी छन् । अन्तरवार्ताकारले के कुराले तपाईलाई असर गर्छ भनेर प्रश्न गर्दा नै उनी भावुक भइन् र रुन लागिन् ।
उनले भनिन्, मैले कहिले पनि यस्तो अन्तरवार्ता दिएकी थिइन्, जहिले पनि हाम्रो बारेमा नकारात्मक एंगलले अन्तरवार्ता लिने गरेका छन्, यसरी खुलेर कसैले कुरा गरेको छैन । उनी निकै भावुक देखिइन् ।
उनले फिल्म क्षेत्रमा कोही पनि आफ्नो निकै नजिकको साथी नभएको बताएकी छन् । उनले अन्य क्षेत्रका ब्यक्ति नै साथी भएकोब बताएकी छन् । तर उनलाई नम्रता श्रेष्ठ निकै राम्रो लाग्ने बताउँछिन् । उनलाई निकै मन पर्ने पुरुष कलाकारमा आर्यन सिग्देल निकै मन पर्छ ।
उनको एक्टिगं निकै मन पर्ने बताउँछिन् । उनले ड्रिम फिल्मवाट सुरु गरेकी थिइन् । यो अन्तरवार्ता हेर्दा पुरानो हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर फेरी प्रशारण गरिएको छ । उनले यो अन्तरवार्तामा भुवन केसीले सबैलाई आइ लभ यु भन्ने गरेको बताएकी छन् ।
नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा भएको नकारात्मक कुरालाई बाहिर ल्याएकी साम्राज्ञी अहिले चर्चामा छन् । उनले फिल्म निर्माताहरुले नयाँ कलाकारलाई नराम्रो नजरले हेर्ने गरेको र आफ्नो ५ वर्षको फिल्मी जिवनमा धेरै नराम्रा अनुभव गरेको भन्दै इन्ट्राग्रममा भिडियो सार्वजनिक गरेपछि वहस सिर्जना भएको छ ।
उनले यसो भनेर भिडियो सार्वजनिक गरेपछि फिल्म निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीले जुन थालमा खायो त्यही थालमा प्वाल पार्ने भन्दै फेसवुक मार्फत प्रतिकृया दिएपछि उनले भुवनले आफु माथि गरेका ब्यवहार सार्वजनिक गरिदिएकी छन् ।
भिडियो हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला !!
भाइरल चियावाली सृस्टिको क’हानीले जो कोहीलाई रुवा’उछ, श्रीमानले दिएका पि’डा सम्झिदै भा’बुक भईन, अब यस्तो नया काम गर्दै चियावाली
यूएईमा अलपत्र नेपाली भन्छन्, ४० पटक दूतावास धाएँ, मेरो कुरा कसैले सुनेन
पलशाह बारे खुशिको खबर! छिट्टै रिहा हुँदै पल..